သက်ဝေ: အမှုတွဲ အမှတ် ၀၀၇-၀၀၈-၀၀၉/၂၀၁၂
ယဒြာ .... သန်းနိုင် ရဲ့ ပန်းသီးဖီလင် သီချင်း ကို တနေ့ သုံးခါနားထောင်ပါ
အိမ်က ပူတူးစိန်ကို ငိုချင်ငိုပေ့စေ.. ပေးမကိုင်တော့ဘူး....ဟူး.........
ဗူးဖြူလေးနဲ့ အသစ်ရမယ် မှတ်တာ....
ကျွန်ုပ်ကား ပထမဆုံး ကောမန့်ရှင်ပင်ဖြစ်၏။
Anonymous February 19, 2012 at 1:09 AM
အစ်မရေ.... စင်စင်ပါ... အပေါ်က
Anonymous February 19, 2012 at 1:16 AM
ဟိး ကိုယ်အသီးလေး အဲလိုမပျက်အောင် ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ပျက်တယ်ဆိုတာလေး အနည်းငယ်လောက် ပညာပေးပါလား။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 19, 2012 at 1:31 AM
အဲ...ညီမလေးတော့ ပန်းမသီးနိုင်လို့ ဘာမှန်းကို မသိပါဘူးမမရယ်...:):)
သက်ဝေ February 19, 2012 at 1:35 AM
ယဒြာကို ကြိုက်သွားပြီ... သီချင်း လင့်ခ် လာပေးပါအုံး... နားထောင်ရအောင်...
ကိုယ်နဲ့ စင်စင်နဲ့ ထူးမခြားနားပါလား...
ဦးမွရေ (နာမည်က တမျိုးပဲနော်...)
ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အဲဒီလို ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ မပြောတတ်ပါဘူး တကယ်တော့ သူများတွေ သုံးသလောက်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် မသုံးဖြစ်သလို အချိန်လည်း များများစားစား မသုံးဖြစ်ပါဘူး... တနေ့လုံး ရုံးမှာ ကစားချိန် ၁၅ မိနစ်လောက်၊ အိမ်ရောက်တော့လည်း အလွန်ဆုံး သုံးဖြစ်တာ တနာရီ နှစ်နာရီလောက်ပါပဲ...။ သုံးတယ်ဆိုတာလည်း ဖဘ ဖတ်တာရယ်၊ တခြားစာတွေ ဖတ်တာရယ်၊ Smurfs /Angry Birds နဲ့ Snoopy Street's Fair ကစားတာရယ်ပဲ ရှိပါတယ်။ ပျက်ချိန်တန်လို့ ပျက်တယ်ပဲ သဘောထားရမှာပေါ့...
အမလည်း သီးလက်စနဲ့မို့ ခူးနေရတာပါလေ... (((ဟမ်)))
Hmoo February 19, 2012 at 1:58 AM
သက်ဝေ February 19, 2012 at 2:10 AM
ဆရာ့ အကြံ သိပ်ကောင်းတယ်... ကျေးဇူး... :D
ကြာပီ February 19, 2012 at 4:28 AM
ဗြစ်တိမ်မှာတော့ ဖုန်းအလုံးလိုက်ကလေးပဲ ပေးပါတယ်။ မူရင်း ဗူးအခွံ၊ နားကြပ်၊ အားသွင်းကြိုး မပါပါ။
မေဓာဝီ February 19, 2012 at 5:10 AM
အိုင်ပက်ရတဲ့ ဒုက္ခက မလွယ်ပါလား အမသက်ဝေရေ ... ။ တော်သေးတယ် အိုင်ပက်မတူးမိလို့ ... အဲဒီပြဿနာမျိုး မကြုံရတော့ဘူး။
အမသက်ဝေ စတိဂျော့ကို ခဏခဏ တ-နေတာနဲ့ သေတဲ့သူ စိတ်မဖြောင့် ဖြစ်တော့မှာပဲ ဟိဟိ။
rose of sharon February 19, 2012 at 7:17 AM
အောင်မယ်လေး..အဲလိုဖြစ်မှာကြောက်လိုက်တာ... အိမ်ကIpad2လေးက ကိုယ်ရော ခလေးတွေရော အသားကုန်ဆော့တား(
Vista February 19, 2012 at 9:50 AM
ဖုန်းဆိုရင်လည်း အဲလိုပဲအဟောင်းပေးမယ်ထင်တယ် တန်အောင်သုံးပစ်အုံးမှ
ကင်းဒဲ တုံးကတော့ အပျက်ပြန်ပို့ လိုက်တာ ပက်ကင်ပိတ် အသစ်စက်စက်တလုံး ပြန်ပို့ ပေးတယ်ဗျာ .. အားသွင်းကြိုးတောင်ပါသေး...
နေ၀သန် February 19, 2012 at 12:06 PM
ဖြစ်ရလေဗျာ.. ကျွန်တော့်အိုင်ဖုန်း 4S စစထွက်ထွက်ချင်းပဲ ပါဝါတွေချက်ချင်း ကျကျသွားတာနဲ့ တစ်ပတ်လောက်စောင့်ကြည့်ပြီး Apple Store မှာသွားပြတာ.. ဘာမှမပြောပဲ အသစ်စက်စက်တစ်လုံးနဲ့ လဲပေးလိုက်ပါတယ်.. အခုထိ ဘာမှကို မဖြစ်တော့တာပါ... စလုံးကများ... ညစ်နေလားဟင်... ???
Kay February 19, 2012 at 3:04 PM
ပျိုးယုဝသုန် February 19, 2012 at 5:39 PM
ညီမရဲ့အိုင်ပက်ကဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် မဘုတ်ပလို လေးကတော့ ၀ယ်တာ၂လုံးရှိပြီ.. ရေငွေ့ရိုက်သွားတာ မန်နျူဖတ်ချရား ဖော်လ်တီ မဟုတ်လို့ ဝ၇န်တီ ကကာဗာမဖြစ်ဘူးဆိုပဲ.. ဆိုးပါ့...
အမ- ကိုနေ၀သန်ပြောတာကို ကျနော်လဲ သဘောတူတယ်။ စလုံးက ညစ်နေတာ ဖြစ်မယ်။ ကျနော်က အိုင်းပက် မဟုတ်ပါဘူး။ အိုင်မက်ပါ။ ၀ယ်ထားပြီး ၁နှစ်တောင် မုကာခင်ပြည့်တော့မယ်။ အမပြောသလို ဖြစ်လာတော့ ပန်းသီးဆိုင်မှာ ကျနော်သွားပြတယ်။ သူတို့စပြောခတည်းက ပြင်ုကည့်မယ်။ မရရင် အသစ်ပေးမယ်။ နောက်တပါတ်လောက်အုကာမှာ အသစ်တလုံးရတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက စားသုံးသူအပေါ်မှာ ခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေမရှိဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်မီဒီယာကိုပြောပြပါ၊ ဆိုပါတော့ သတင်းစာတိုက်ကို ပြည်သူ့အသံလိုနေရာမျိုးမှာ ခုရေးထားတာလေး ရေးပို့ပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် malaysiakini ကိုပိုံကည့်ပါ၊ လေးစားစွာဖြင့် နိုင်ထွန်း။
It's not bcos of Apple... It's bcos of Singapore...
ပန်းချီ February 19, 2012 at 7:52 PM
ဟွန့်..ပန်းသီးရော၊ ဘယ်ရီအပြာရော စိတ်နာတယ်။ တော်တော်လေး (ကြီး) ပါးD နောက်ဆို အောရင့်ခ်ျ တို့ အပ်ပရီကော့တ် တို့များထွက်လေးမလား ???
နေကောင်း၊ ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာပါစေ ချစ်မး))
ဇွန်မိုးစက် February 19, 2012 at 11:32 PM
ပန်းသီးတံဆိပ်နှင့် ပစ္စည်းများ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူဖြစ်၍ အမှုတွဲများ မကြုံသေးပါ။ :D
မိုးငွေ့...... February 20, 2012 at 11:24 AM
ဖတ်ရတာနဲနဲတောင်လန့်လာတယ် သာမီးမှာလဲ အဲဒီပန်းသီးအိုင်ပက်အမှတ်၂ကို ကိုင်ထားတာ မကြာသေးဘူး...။
မြတ်ကြည် February 20, 2012 at 2:15 PM
မြတ်ကြည်လည်း အမှတ်၂ ကို မသုံးပဲသိမ်းထားတာ ၁လ လောက်ရှိပြီ။ ပြန်ထုတ်စစ်ကြည့်ဦးမှ။
mae February 20, 2012 at 6:58 PM
iphone မတတ်နိုင်ဘူး မမသက်ဝေ..
8Yar February 21, 2012 at 10:24 PM
ဟား ဟား ဟား ဟား ဟုတ်တယ် အစ်မရေသက်ဝေ။ ကျွန်တော်ဆိုလည်း တော်တော် စိတ်ညစ်မိမှာပဲ။
TZA February 21, 2012 at 10:47 PM
refurbished နဲ့လဲပေးတာလား အမ၊ အဲဒါဆိုရင်တော့ မမိုက်ဘူး.. ကျနော့်ဟာကတော့ ခုထိ အိုကေနေတုန်းပဲ။
...အလင်းစက်များ February 23, 2012 at 6:31 PM
ပေါင်ချိန်စက်တုန်းကလို ပဲ လုပ်ပစ်လိုက် အစ်မသက်ဝေ။ ဟီးဟီး (မြောက်ပေးသွားသည်)
မြသွေးနီ February 27, 2012 at 2:07 PM
သြော်... ဒီမှာတော့ အိုင်မပက်ပဲ ရှိတဲ့ အစုတ်လေးတောင် ဟဲလို..ဟဲလိုနဲ့ ခေါ်မကြား အော်မကြား၊ လူကြီးမင်းနဲ့ မတွေ့ပဲ လိုင်းမိရင်က်ု ၀မ်းသာနေရ..၊ အင်း.....ငါးထောင်တန်ဖုန်းများ ပေါ်လာလို့က ဘယ်လောက် လိုင်းတွေ ကြပ်တည်းဦးမလဲ တွေးပူရင်းးးးးးးး .....
T T Sweet March 3, 2012 at 7:39 PM
သယ်ရင်း ... ခုမှပဲ အားလို့ ပို့စ်တွေ ဖတ်မိတယ်။ အပ်ပဲလ်က အဟောင်းကို အဟောင်းနဲ့ပဲ ပြန်လဲပေးတာပေါ့။ တော်သေးတယ် တို့ဟာလေးကောင်းနေသေးလို့။